အနုပညာအိမ်လေး: ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်း အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရန်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကဆို
မိမိ Website တွင် ဖေါ်ပြနေသော သတင်းများသည် သတင်းမီဒီယာ Website များမှ သတင်းများအား ဦးဦးဖျားဖျား အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိရှိစေရန် အတွက် ကူးယူဖေါ်ပြ နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်း အပ်နှံလိုသူ နှင့် ဆက်သွယ် လိုသူများ E mail : sawkyawoo8888@gmail.com / Mobile : (+47 ) 46356503 သို့ ဆက်သွယ်နှိုင်ပါသည်။
ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်း အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရန်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကဆို
| Sunday, January 29, 2012
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ပထမဆုံး ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ခရီးစဉ် အဖြစ် ထားဝယ် မြို့သို့ရောက်ရှိစဉ်အတွင်း ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အမျိုးသား
ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရွေးကောက်ပွဲဝင်သည့်အဓိကဦးတည်ချက်မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအထဲမှ ပြည်သူများ
အကျိုးမဖြစ်စေသည့် အပိုင်းများအား ပြုပြင်ရန် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က “ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့ အခါမှာ အရေးကြီးတဲ့ ဦးတည်ချက်တစ်ခု ဆိုပြီးတော့ သတ်မှတ် ထားတာကတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ထဲမှာ ပြည်သူတွေကို အကျိုးမဖြစ်စေတဲ့ အပိုင်းတွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ပဲ ။ ဒါကျမတို့ လုပ်ကို လုပ်ရမယ်လို့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်” ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပက်သက်၍ NLD ၏ သဘောထားကို ထားဝယ်မြို့၌ ပြောကြားသွားသည်။
ထို့ပြင် နိုင်ငံရေးပါတီတရပ်အနေဖြင့် ပြည်သူ့နှင့် နီးနီးစပ်စပ်နေနိုင်မှ အရည်အချင်းရှိသည့် ပါတီတရပ်ဖြစ်
မည်ဟုလည်း ပြောဆိုသွားသည်။ “ ကျမတို့အခု တနင်္သာရီကို ဆင်းလာရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့
ပြည်သူနဲ့ပြန်ပြီးနီးစပ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ် “” ၎င်းက ပြောကြားသည်။
၊ မောင်းမကန် ကမ်းခြေတို့အထိ သွားရောက်ခဲ့ရာ ယင်းခရီးစဉ် တစ်လျှောက် ပြည်သူ သောင်းနှင့်ချီ၍ စုဝေး၍ လိုက်ပါခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။
လာမည့် ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သော ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေ
သကြီး ၉ ခုရှိ မြို့နယ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ရှိ လစ်လပ်နေရာ ၄၈အနက် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ထားဝယ်ခရိုင်
၊ လောင်းလုံမဲဆန္ဒနယ်တွင် NLD ပါတီမှကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးအောင်စိုးမှဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်
ထားဝယ်မြို့လယ် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းပေါ်တွင် ကြိုဆိုသူ လူအုပ်ကြီးအား နှုတ်ဆက်နေသည်ကိုတွေ့ရစဉ်
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပက်သက်၍ “ လုပ်ပေးချင်တဲ့စေတနာရှိရုံနဲ့ မပြီးပါဘူး။ လုပ်တတ်ကိုင်တတ်မှ ဒီစေတနာကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှာပါ “ ဟု ထားဝယ် NLD ရုံးခွဲတွင် ပြောကြားသောမိန့်ခွန်း တွင် ထည့်သွင်းပြောကြားသွားသည်။
“ အခုလိုမျိုးလာလိုက်တော့ လူတွေရင်ထဲမှာ ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိသွားတာပေါ့။ နောက် Generation တွေက တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးဘူးလေ။ အဓိက ကတော့ မဲဆွယ် ဖို့လာတာပေါ့လေ။ ခုလိုမျိုး လူထုအားပေးမှုနဲ့ဆိုရင်တော့ နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ” ဟု ထားဝယ်ဒေသခံ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မဲဆွယ်ခရီးစဉ်နှင့် ပက်သက်၍ ပြောဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ယနေ့ခရီးစဉ်တွင် ထားဝယ်မှ တဆင့် လောင်းလုံမြို့နယ် အောက်ရေဖြူကျေးရွာ၊ ထိုမှ မောင်းမကန်သို့ နေ့လည်တစ်နာရီခန့်တွင် ရောက်ရှိပြီး ညနေ (၃) ခွဲ ၀န်းကျင်ခန့်တွင် ထားဝယ်မြို့ သို့ရောက်ရှိကာ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းနောက်တွင် ညနေလေယာဉ်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၂၀၁၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် မှ လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် ပဲခူးမြို့ခရီးစဉ်သည် ရန်ကုန်မြို့ပြင်ပ သို့ပထမဆုံး သွားရောက်သည့် ခရီးစဉ်ဖြစ်၍ ယခုထားဝယ်ခရီးစဉ်သည် နယ်လူထုနှင့်ထိတွေ့သည့် ဒုတိယမြောက် ခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။ ။
ထားဝယ်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၉၊ ၂၀၁၂ (YPI)
သတင်း ( MNN )SUNDAY, JANUARY 29, 2012 Posted by
♥ဆက်သွယ်မယ် ဆိုရင်♥ sawkyawoo8888@gmail.com ♥
ယနေ့ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ရက်လ ချိန်ခါ
ဒို့တာဝန် . . . .အရေးသုံးပါး
စာလုံးဆိုက်ကို ZOOM ချဲ့ပြီး ဖတ်ရှုနှိုင်ပါသည်
အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ပြက္ခဒိန် ကြည့်ရန်
မိမိ Website အား Google Chrome ဖြင့်ကြည့်ပါက ပို၍ အဆင်ပြေပါသည်။
အော်စလို မြို့ရဲ့ ရာသီဥတု
+17 H: +21° L: +11° Oslo Friday, 22 June See 7-Day Forecast Sat Sun Mon Tue Wed Thu +17° +17° +19° +19° +19° +19° +11° +10° +9° +9° +11° +9° © Booked.net ရွှေမြန်မာ အွန်လိုင်းစတိုး ( နော်ဝေ )
အဖြူရောင် ပရဟိတအဖွဲ့ သို့ လှူဒါန်းနှိုင်ပါသည်
ပြည်သူချစ်သော တပ်မတော် ဖြစ်ပါစေ
၁၉၅၁ မှ ရေးခဲ့တဲ့ပန်းချီ ခုခေတ်နဲ့လဲညီနေဆဲ
အစိုးရ အမှု့ထမ်းများ မှတ်သားစရာ
တိုင်းရင်းသား ပြည်သူ့ ဆန္ဒအတွက်ပါ
အမေ့ အိမ်လို နိုင်ငံမျိုး ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်
၂၀၁၂ မတ်လ စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ် ဓါတ်ပုံ
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ရုံးသို့ စာပို့ရန်
အနုပညာအိမ် မှ ကဏ္ဍစုံလင် ချိတ်ချင်ရင်
F.F.S.S(Ygn) Website ဖွင့်လိုက်ပြီ
ပြုပြင်ရမဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ
အဖြူရောင်အားမာန် အွန်လိုင်းမိသားစုမှာ အဖွဲဝင်ပြီး လေ့လာကြည့်ပါ အကျိုးအမြတ်ရှိပါသည်။
မြန်မာကျပ်ငွေ တွက်ချက်မှု ဇယား
<!-currency converter widget - html code - fx-rate.net --> Myanmar Kyat Converter<!-end of code-->
သင့် နိုင်ငံ IP နံပါတ်
ခရစ်ယာန် ဘာသာ စာမျက်နှာများ
MFIC ခရစ်တော်၌ မြန်မာမိသားစု
KBPS ကရင် Baptist Church (Singapore)
Hymn / ဓမ္မသီချင်းများ
myanmar christian song/a>
ဘန်ကောက် ခရစ်တော် အသင်းတော်
ဦးနှော အောက်မေ့ဘွယ်ရာ မြန်မာနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် အသင်းတော်
Myanmar Christian E-book
GLOBAL KAREN BAPTIST FELLOWSHIP
Swedish Karen baptist Fellowship
Hill Light Theological Seminary
Karen Baptist Theological Seminary
Kawthoolei Karen Baptist Bille School & College
Judson Baptist Church Singapore
First Burmese Baptist Church of San Francisco
Myanmar Christian Fellowship(KLBC)
Myanmar Gospel Church
Myanmar Gospel Song Lyric
မြန်မာခရစ်ယာန် အသင်းတော် (ထိုင်း)
ကွန်ပြူတာအသုံးပြုသူတိုင်း အသုံးဝင်သည့် စာအုပ်များ
Gmail ရဲ့လှုိူ့ ဝှက်ချက်တွေသိချင်ရင်
PHOTOSHOP NOTES(2) အကြောင်း
ADOBE PHOTOSHOP CS (မြန်မာ)
ကွန်ပြူတာ Softwere များ
နော်ဝေ စာကို မြန်မာပြန်ရန်
ဖိုးဝမောင် ၏ အတုယူစရာ ဘဝသင်္ခန်းစာ
မြန်မာ့ တိုင်းရင်း ဆေးမြီးတို
Medical Writings ဆေးပညာ
ပြည်တွင်း အိမ်ခြံမြေ အရောင်းအဝယ်
ပြည်တွင်း အလုပ်အကိုင် ရှာရန်
မြန်မာ PDF E-Book မြို့တာ်
ကရင်ဘာသာ E-book များ
MYANMARWORLD DIRECTORY ~ မြန်မာလမ်းညွှန်
မြန်မာ ဒိုမိန်း ဝယ်ရန်
မြန်မာ PDF E-book မြို့တော်
အကောင်းဆုံးဖတ်ရန်TheBestOf Website အစုဝေးများ
မြန်မာ့ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး လမ်းညွှန်
ကိုယ့်ကွန်ပြူတာရဲ့ အင်တာနက် လိုင်းချက်ချင်ရင်
ခေါင်းစဉ် Your Text
သတင်းစာ နှင့် ဂျာနယ်များ
ဘလော့ပညာများစုစည်းမှု အောင်လေး ၏ နည်းပညာ(E-Book)ပေါင်း(၂၀)
Viber ကို ကွန်ပြူတာမှာသုံးမယ်
သင့် ကွန်ပြူတာ အတွက် လိုအပ်တာတွေ ဒီမှာ အကုန်ရှိတယ်
ဖုန်းနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ဆိုက်လေးတွေ
နေ့စဉ် ရုပ်ရှင် (သစ်ထူးလွင်)
Free Myanmar VCD
သစ်ထူးလွင်( နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင် )
မြန်မာ ခရစ်ယာန် ဓမ္မတေးများ နားဆင်ရန်
ကက်သရင်းအက်ရ်ှတန်၏ သမိုင်းဝင် ပထမဆုံးခရီးစဉ်အပြီး ...
လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေများကို အကဲဖြတ်ရန် ကုလသမဂ္ဂ လူ...
ရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ချင်းနှင့် ရှမ်းပါတီပြော...
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀ ကို ချင်းအမျိုးသားနေ့အဖြစ်ကျင်းပသင်...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ယနေ့ ခရီးစဉ် ...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရန် လှုပ်ရှားခဲ့သူ GW...
အကျင့်ပျက်နေသော ပဲခူးတိုင်းမှ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်မျ...
မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်း ကိစ္စများအတွက် ကော်မရှင် သတိပေး...
မီဒီယာ ခေတ်ပြောင်းချိန်ရောက်ပြီလား ( သတင်း-ဆောင်းပ...
အနုပညာသမားတွေ စုပေါင်းပြီး The Artizens အဖွဲ့အတွက်...
Green Network တရားဝင် ဖွဲ့စည်းတော့မယ် ( ရုပ်သံ-သတင...
ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ကလေးငယ်တွေကို ပညာရည်ချွန် ဆုပေးပ...
နာယက ဦးတင်ဦး ပဲခူးတိုင်းအတွင်း တိုင်းအောင်နိုင်ေ...
အလုပ်ခွင်အတွင်း သေဆုံးမှုအတွက် နစ်နာကြေးပေးရန် ငြင်...
"တပ်လည်းရူံး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလည်း ရှုံးဖြစ်မှာ ကြောက...
31-01-2012 ရက်နေ့ ကျင်းပနေသော အမျိုးသားလွှတ်တော် တတ...
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ၏ အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်များအ...
“ဥရောပ သမဂ္ဂ၏ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုများကို တဆင့်ချင...
ယနေ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ခရီးစဉ် သ...
အစိုးရနှင့် အပစ်ရပ်ရေး ဆွေးနွေးရန် NMSP ထွက်ခွာ
ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွင် တပ်မတော်ပါဝင်ရန...
ဧပြီ ၁ ရက်တွင် ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင...
"ဒီမိုကရေစီလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်း မီဒီယာ ဖွံ့ဖြိ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့ (မနက်ဖြ...
" လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲဘယ်လို ပေးကြမလဲ "
ထားဝယ်သားတွေ သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုဆိုကြတဲ့ ဒေါ်အောင...
ထားဝယ်မြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံး...
ကော့မှူးမြို့နယ်က ပြည်သူတွေ ဂုဏ်ပြု ကြိုဆိုကြတဲ့ တ...
ဂုဏ်ယူတယ် - ကျော်သူ
ယနေ့ ကျင်းပနေသော အမျိုးသားလွှတ်တော် တတိယ ပုံမှန် အစ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တောင်ငူ သို့လာေ...
စက်ဆန်းမီးဘေး တလပြည့်အထိမ်းအမှတ်လှူဒါန်းပွဲ ( ဓာတ်...
ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်း အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အခြေခံဥပဒေ...
၅၀၀၀ ကျပ်တန် SIM Cards မဖြစ်နိုင်သေး / သတင်းစာ ရှ...
မောင်းမကန်မှာ ဒေါင်းအလံစိုက်ခဲ့တဲ့ အမေစု ရန်ကုန်ပြ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထားဝယ်မြို့ခံများကို နှုတ်ဆက်ပြ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထားဝယ် စည်းရုံး...
ထားဝယ်ခရီးစဉ် အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ပြောစကား...
လွတ်မြောက် ကျောင်းသားများနှင့် ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သ...
ပြည်သူများ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ လေ့လာရန် ဒေါ်အောင...
ပြင်သစ်သံရုံးတွင် ပြလုပ်သော ဓါတ်ပုံပြပွဲသို့ ဒေါ်အေ...
(၁၈)ကြိမ်မြောက် ဥရောပရောက်မြန်မာများ၏ မြန်မာ့အရေးေ...
၈၈ နိုင်ငံရေး နောက်ခံ စာအုပ် စာပေ စီစစ်ရေး ခွင့်ပြ...
ယနေ့အထိ ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူနိုင်ခြင်း မရှိသေးသည့် တ...
အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာနှင့် မြန်မာကျပ်ငွေ လဲလှယ်နှုန်းအာ...
လူထု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို သိန်းဂဏန်းရှိ ထားဝယ်ြ...
လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲဘယ်လို ပေးကြမလဲ - စာအုပ် ...
အကယ်ဒမီပေးပွဲတွင် ဓာတ်ပုံ၊ဗီဒီယို ရိုက်ကူးခွင့်အား...
ရွှေနံသာလယ်သမားများ အခက်တွေ့နေ ဦးခင်ရွှေ ဇေကမ္ဘာကုမ္ပ...
ကော့မှူးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မနက်ဖြန် ထားဝယ...
ဗိဿနိုး၊ သရေခေတ္တရာအပါအ၀င် ရှေးဟောင်းမြို့တော်များအ...
စွန့်ပစ်ခံရသည့် ကလေးငယ်များကို အလုပ်အကိုင်ရရှိသည်အ...
ထောင်တွေထဲမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ကျန်သေးတယ် (...
ဟင်္သာတ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ရုံးဖွင့်လှစ်ပ...
အဖွဲ့ချူပ် ပါတီလူငယ်ရံပုံငွေ ဈေးရောင်းပွဲတော်ရှိ ...
ဦးသိန်းဇော်၏ အဆိုနှစ်ခု အတည်ပြု
လွှတ်တော်ထဲ ရောက်ပါက မတရားဥပဒေ ဖျက်သိမ်းရေး NLD ကြိ...
မျက်နှာချင်းဆိုင် လမ်းမှာတွေတဲ့ ကားနှစ်စီး ( ရင်ဖွ...
ပြည်သူတွေကို နှိပ်စက်လျင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင်တွေ အရေးယ...
လေးစားမိသော ဘလော့ဂါ ( သတင်း-ဆောင်းပါး )
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ၈၈ မျိုးဆ...
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မီဒီယာလုပ်ငန်းများ တိုးတက်အောင်ေ...
ILO နှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများကွန်ယက်(မြန်မာ)၏ သေ...
‎မဇ္ဈိမ သတင်းဌာန တည်ထောင်သူ နှင့် အယ်ဒီတာ ချုပ် ဖြ...
Live Together with Wetland - Photo Exhibition ဖွင်...
မြန်မာအစိုးရ၏ ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲမှုများကို အားရကြေ...
ကေအိုင်အိုတို့ တောင်းဆိုချက်မှ စကားလုံးတချို့ ပြင်...
ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် တ...
ရွှေညဝါ ဆရာတော်အတွက် အန်အယ်ဒီမှ ဆောင်ရွက်မည
ယနေ့ Facebook မှ လွှတ်တော်သတင်းများ
ဦးဂမ္ဘီရ အား မဟန ဆင့်ခေါ် ဆုံးမသြ၀ါဒပေး ရန်ဟုဆို
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာေ...
လပိုင်းအတွင်း စာပေစိစစ် ဖျက်တော့မယ်တဲ့
ကိုဇာဂနာ၊ ဒေါ်ဘောက်ဂျာနဲ့ ဒေါ်ခင်သန်းမြင့်တို့ NED မ...
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ...
မီဒီယာမှ တဆင့် ဦးခင်ညွန့်သို့ ပန်ကြားချက်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဆ...
လူထု အတွက် အမှန်တကယ် ကာကွယ်မယ့် ဥပဒေပြဌာန်းဖို့ ကု...
ကိုပေါ်ဦးရဲ့သွေးက ကျွန်တော်တို့ထက်ရဲတယ် ( ဓာတ်ပုံ-...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘနာဇီရာဘူတို ဒီမိုကရေစီဆု ချ...
ပါကစ္စတန် သမ္မတ အာဆစ်အလီဇာဒါရီ မြန်မာနိုင်ငံသို့ နှစ...
တရားမျှတမှု မရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ကော...
တာဝန် ကျေသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်တဲ့ ကိုသက်နွယ် (ခ) ကိုငြိမ...
ပြည်သူများအား အနိုင်အထက် ပြုကျင့်ခြင်း၊ မောက်မာစော...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၌ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအား သူရဦး...
အပြောင်းအလဲ နှင့် စီမံခန့် ခွဲမှု Change Management...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကိုမင်းကိုနိုင် ၊ ကိုကိုကြ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ၈၈၊ ၉၆၊ ၉၈ ကျောင်းသားများ ...
တပ်မတော်ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင်ကို အမိန့်ချရက် ...
အီးမေး ပေးစာ တစ်စောင် ( ရင်ဖွင့်သံ )
သုံးခွ မြို့နယ်အတွင်း အာဏာကို အလွဲသုံးစားလုပ်၍ လယ်...
ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်အား ရှေ့နေခေါ်ပေးမည်ဟု နော်အုန်း...
ဆင်နုကုန်း ကျောက်တွင်းကြောင့် သေဆုံးသူ နစ်နာကြေး မ...
မြန်မာအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့မှု ဖယ်ရှားပေးရန် ဖိလစ်ပို...
အမေရိကန်-မြန်မာ လွှတ်တော်နှစ်ခု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မ...
DVB သတင်းဌာန၏ ကြေငြာချက်အပေါ် BURMA VJ MEDIA ၏ တု...
အီးယူက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများကို စ...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၆၅ ဦး ကျန်ရှိနေကြောင်း NLD ထ...
ကိုမင်းကိုနိုင် ဦးဆောင်တဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား...
နော်ဝေ နိုင်ငံမှ မြန်မာပြည်သို့ သွားရောက် လည်ပါတ်ခ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ပါကစ္စတန် သမ္မတဇာဒါရီ တွေ့ ...
မြန်မာ့အကောက်ခွန်နှုန်းစာရင်း သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက် ဝက...
လသာမြို့နယ် အတွင်း လမ်းဘေး ဆိုင်ခန်းများ အတွက် ငွေ...
မတရားမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ ရှေ့ကု...
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲကို နိုင်ငံတကာက လေ့လာ ကြည့်ရှု...
လွတ်မြောက် လာတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကြိုဆို ...
“ကျနော်တို့ နိုင်ငံတွင်းမှာ ပြေလည်ရင် နိုင်ငံတကာ ဆ...
လောင်းကစားမှု ပပျောက်ရေး ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါ (ြ...
ထောင်အတွင်း ဆရာဝန်များ ရှိသော်လည်း ဆေးဝါး လုံလောက်...
ရန်ကုန်လေဆိပ်ကို ဗုံးခွဲရန်ကြံစည်သူများ ဖမ်းမိ
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ကိုသက်နွယ်(ခ)ညိမ်းလူ ၂၂-၀၁-၂၀...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲသာ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတပါက အရေ...
အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန်မက်ကိန်းနှင့် အထက်လ...
မြိတ်မြို့ နယ် NLDရုံးခန်းဖွင့်ပွဲနှင့်ဆိုင်းဘုတ်တ...
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ ၏ သဘောထားကြေငြာချက်အပေါ်...
အမေရိကန်တို့၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစြု...
ABSDFကျောင်းသားတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဟောင်း တချို့ မြ...
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကျစ်လျစ်ခိုင်မာ တော...
“အမျိုးသားတန်းတူရေး”နှင့် လွှတ်တော်နိုင်ငံရေး ဘယ်လမ...
RFA ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ် အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည...
'အနာသိတယ်၊ ဆေးရှိတယ်' ရှမ်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ပတ်စ်ပို့သက်တမ်းတိုးခြင်း ...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် နှင...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းချ ခံခဲ့ရသော သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်...
မန္တလေးအိုးဘို ထောင်တွင်းရှိ ကျန်ရှိနေသော နိုင်ငံရေ...
ပုသိမ်မြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် တို...
ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး ဆန္ဒပြခဲ့သူ ကိုထင်ကျော်မှ က...
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် စည်မြောင်းဦးစီးဋ္ဌာန၊ ပြည်ေ...
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ ပြုလုပ်မည့် သတင်းစာရှင်...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏ အင်တာဗျူးအချို့ ကန့်သတ်...
ခွင့်လွှတ်တယ်၊ မေ့ပစ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူး (သတင်း-ဆောင်း...
ရွှေညဝါ ဆရာတော်ရဲ့ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက် သြဝါဒစကား ( ရုပ်...
( မဟန ) ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ကျောင်းတိုက်ကို စွန့်ရတေ...
အမျိုးသား အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးရာဇာတ် နေ့ အခမ...
ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပထမဆုံး ပြည်ပ မီဒီယာ အင်တာဗျူး
SNDP ကမ်းလှမ်းချက် SNLD ငြင်းဆို
အစိုးရသစ် လက်ထက် ပထမဆုံးကျင်းပမည့် အကယ် ဒမီပွဲ အခမ...
ပဲခူးတိုင်းတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုး အောင်နိုင်ရေးအတွက် ...
ဂျွန်မက်ကိန်း နှင့် လွှတ်တော်အမတ်များ မြန်မာနိုင်ငံ...
တရားဝင် အကြောင်းကြားစာနှင့် ကျောင်းထဲကို ဝင်လာတာပါ...
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ၅ မြို့နယ် အစည်းဝေ...
KNU အဖွဲ့သားများအတွက် မှတ်ပုံတင် ထုတ်ပေးမည်
အရှင်ပဏ္ဍဝံသ၏ စစ်ကြောရေး အတွေ့အကြုံ နှင့် လွတ်ငြိမ်း...
အဖျက်သိမ်းခံ တိုင်းရင်းသား ပါတီကြီး လေးခု မှတ်ပုံတ...
နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရန် ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းက လူဘောင်...
အစိုးရနှင့်ကေအိုင်အို ဆွေးနွေးပွဲအပစ်အခတ်ရပ်ရေး သေ...
အင်န်အယ်ဒီက နေပြည်တော်တွင် အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့...
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခြံဝန်းအား ကားဖြ...
လွတ်လပ်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အနုပညာ ဆွေးနွေးပွဲ ...
မလေးရှား နိုင်ငံတွင် တရားဝင် မြန်မာ လုပ်သားတစ်ဦး ...
တေးရေး တေးဆို ကိုစံလင်းနဲ့ ကိုတိုးလွင်တို့ မဂ္ဂင်ေ...
SHOE GALLERY & CUSTOMER များ၏ တတိယအကြိမ် စုပေါင်း ...
ဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာရဲ့ ၉၃ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ အကြိုပဲ...
ရွေည၀ါဆရာတော် ကျောင်းတိုက်မှ "၁၉-၂-၂၀၁၂ ရက်နေ့ (တ...
ရေနဂါး အလှည့်ကျသော ၂၀၁၂ တရုတ်နှစ်ကူး
ဦးခွန်ထွန်းဦး ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ကျားဖြ...
ဌာနတိုင်းတွင် သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပြ...
၈၈ မျိုးဆက် နှင့် ရွှေညဝါ ( ရုပ်သံ-သတင်း )
၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးခင်ညွန့်နှင့် အထူးတွေ့ဆုံမေြး...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်...
အမေရိကန်လွှတ်တော်၏ SOPA (Stop Online Piracy Act) နှ...
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများမှ ...
နေပြည်တော် နှစ်နေရာအတွက် ၈၈ နှင့် ဟစ်ဟော့အဆိုတော်က...
ABSDF လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရန် ဆန္ဒရှိ
အစိုးရနှင့် ကေအိုင်အို ရွှေလီမြို့ ဆွေးနွေးပွဲနှင့်...
ပေးဆပ်ဖို့ ဝန်မလေးတဲ့ ရွှေညဝါဆရာတော်ရဲ့အခြေအနေ ( ရု...
ကွယ်လွန်ချိန် အထိ ယုံကြည်ချက်ကို ဆုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ေ...
ငြိမ်းချမ်းရေး လက်ဆောင်အဖြစ် မန်းငြိမ်းမောင်ကို လွှ...
ကိုကျော်ကျော် (ဒေါပုံမြို့နယ် NLD လူငယ်) ၏ ထောင်တွ...
ဂုဏ်မယှဉ်နိုင်သည့် ဂုဏ်ကြီးရှင်ကြီးများ... (ဆောင်း...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ပတ်သက်၍...
အကျဉ်းကျ ခံနေရသည့် သံဃာတော်များ ရှိနေသည်ဆိုပါက စာရ...
ထောင်များတွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ မည်မျှကျန်ေ...
လိပ်ပြာ သန့်သန့်နဲ့ တရားဟောခဲ့တဲ့ ရွှေညဝါဆရာတော် ( ...
အာဏာရှင်စနစ်အောက်က သံဃာတော်များ (သတင်း-ဆောင်းပါး ...
ဗဟန်းမြို့နယ် အမျိးသား ဒီမိုကရေစီ ရုံးခန်း ဖွင့်လှ...
ရွှေည၀ါဆရာတော် ကိစ္စ ၈၈ မျုိးဆက်ကျောင်းသားများ မနက်ြ...
၉၆ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ကိုချစ်မင်းလေး ထောင်တွင်း အ...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ကျေးဇူးဆပ်တဲ့ အနေနဲ့ ဗိုလ်ခ...
အစိုးရနှင့် KIO ရွှေလီတွင် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမည်
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့နှင့် SSA (S) လက်မှ...
ချိတ်ပိတ်ခံ ကျောင်းနှစ်ကျောင်း အရှင်ဂမ္ဘီရ ပြန်ဖွင်...
လပွတ္တာမြို့နယ်၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဆိ...
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် မြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ...
၈၈-ပြည်သူ့အင်အားစုပါတီနှင့် မြန်မာ့လူဘောင်သစ် ဒီမိ...
KIO ၏ ပြည်သူလူထုထံသို့ အသိပေးပန်ကြားချက်
အစိုးရသစ် လက်ထက် ၁၀ လ အတွင်း စတုတ္ထ အကြိမ် လွတ်ငြိမ...
အစိုးရရာထူး ရယူရန် အလားအလာရှိကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစ...
မိုင်း မသယ်ဘဲ မိုင်း သယ်မှုနဲ့ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ နန်း...
လားရှိုးထောင်က မဂ္ဂင်ဆရာတော် ပြန်လွတ်လာပြီ ( ရုပ်သံ-...
မီဒီယာ ဥပဒေ အတည်ပြုဖို့ မျှော်လင့်နေတယ် ( ရုပ်သံ-သ...
"Hack ချင်ရင် Disk ထဲမှာရှိတဲ့ Data တွေကိုလည်းကြည့...
စစ်မှန်တဲ့ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ဖို့ ...
ကျောင်းနံရံတဝိုက် ဒေါင်းအလံပြန်စိုက်မယ်....( ဓာတ်ပ...
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အပေါ် အမြင်များ
မီဒီယာဟာ ရန်သူမဟုတ်လို့ ကြောက်ဖို့မလို ( သတင်း-ဆော...
ဘားအံထောင်က လွတ်မြောက်လာသူ Bloger နေဘုန်းလတ်နှင့် ...
“ချည်နှောင်မှု ရှိတယ် ပြစ်မှုတစ်ခု ကျူးလွန်ရင် ကျန်တ...
နိုင်ငံ့ အရေး အများအပြား ဆောင်ရွက် သွားမယ်လို့ ဦး...
“အရင်ထောင်က လွတ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေမျိုးနဲ့ မတူပဲ အခုအ...
“ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ် အထင်မသေးသင့်ဘူး ပြုပြင် ပြောင်...
“တိုင်းပြည်မှာ ဖြစ်သင့် ဖြစ်ထိုက်တဲ့ အခက်အခဲ တစ်ခု...
မစိုးရိမ် ဆရာတော် အရှင်ဝီရသူရဲ့အကျဉ်းထောင်တွင်း အေ...
ပြင်သစ် နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံး ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု ဒေါ်အော...
နော်ဝေကုမ္ပဏီများကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးလု...
ရွှေဂုံတိုင် မိဘမဲ့ကလေး ပြုစုရေးဌာန၌ရှိသော မိဘမဲ့ကေ...
တောင်ဥက္ကလာပမှ မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက် ပြန်ဖွင့် ( ဗုဒ္ဒဘာ...
မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသအသီးသီးရှိ အကျဉ်းထောင်များတွင် ယု...
လွတ်ပေမယ့် နောက်ဆက်တွဲ အမှု ရင်ဆိုင်ရဦးမယ့် ဗိုလ်ြ...
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အော...
“အာဏာပိုင်တွေက အစ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို မသွားရင် မရတေ...
"မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ရပြီဆိုရင် ပြည်ပက မီဒီယာတွေ တော...
တောင်ကြီးထောင်မှ လွတ်မြောက်လာသူ ကိုမြအေးနှင့် အင်တ...
လွတ်မြောက်လာသူများရဲ့ အသံများ ( Burma VJ )
အရှင်ဂမ္ဘီရ နှင့် မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက်တွင်း မြင်ကွင်း(...
ခေတ်ကို ပြောင်းဖို့ ဘက်ပေါင်းစုံက ကြိုးစားဖို့ ကို...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အများကြီး ကျန်သေးတယ် ဆက်ပြ...
အပြု သဘောဆောင်တဲ့ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်ကို ကြိုဆ...
နိုင်ငံရေးအရ အဖမ်းခံခဲ့ရပြီး နိုင်ငံရေးအရ ပြန်လွတ်...
ထောင်က ပြန်လွတ်လာတာ မဟုတ်ဘူး ထောင်က ပြန်ထွက်လာတာ (...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား NLD ပေးပို့စာရင်း အခြေခံ လွတ်...
မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းသို့ ဝင်ရောက် လာသည့် တာလီ ဘန်...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရဲ့ ဒီလှိုင်းဂျာနယ် လ...
ကျန်နေသေးတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံးကို အမြန်...
နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်ရဲ့ပြင်ပမှာ နိုင်ငံရေး အင်အားစုေ...
အမှတ်မထင် ဆုံတွေခဲ့ရတဲ့ ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်...
မွန်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဦးဇင်းဇော်လတ် ခေါ် အရှင်ဥက္က...
ပူတာအိုအကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူ ကိုအောင...
ရမည်းသင်းထောင်မှ လွတ်မြောက်လာသည့် ဦးဝေပုလ္လ နှင့်ေ...
နံပါတ်တစ် ညီညွတ်ရေး၊ နံပါတ်နှစ် ညီညွတ်ရေး၊ နံပါတ်သ...
KNU နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်နေချိန်တွင် ပစ်ခတ်...
ငြိမ်းချမ်းရေး ယူတယ်ဆိုတာ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသာ...
ပြန်လည်အဖမ်းခံရသူဗိုလ် ကြီးနေမျိုးဇင်အာမခံဖြင့် ပြ...
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြည...
လွှတ်ပေးတာ ကောင်းတယ် ဖမ်းတာ မကောင်းဘူး ကျန်နေတဲ့ နိ...
အင်းစိန် ထောင်မှ လွတ်မြောက် လာသူ လှိုင်သာယာ ဒီချုပ်...
ကြိုဆိုရေး စခန်းဖွင့်ပြီး ကြိုဆိုတဲ့အတွက် မျက်ရည်က...
အင်းစိန်ထောင်မှ လွတ်မြောက် လာတဲ့ လှိုင်သာယာ ဒီချုပ်...
ဒီမိုကရေစီ ပေါ်ပေါက်ရေး အတွက် ကျန်အနုပညာရှင်များနှင...
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ အနေနဲ့ အပြောင်း အလဲကို လု...
“အာဃာတ မရှိ၊ နိုင်ငံရေးမလုပ်တော့၊ ကံ ကံ၏အကျိုး ဦး...
ထောင်ထဲမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကျနော်တို့ ရဲဘော်တွေဟာ တိုင်...
ထောင်ထဲမှာ ကျနော်တို့ ရဲဘော်တွေ ကျန်နေသေးတယ်ဟု ကို...
ထောင်ထဲမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ရဲဘော်တွေ အတွက် ဝမ်းနည်းရတယ်...
မနက်ဖြန်မနက် ( ၁၀ ) နာရီတွင် နေပြည်တော် ပြည်ထဲရေးဝ...
ကျန်ခဲ့တဲ့ ရဲဘော်တွေ အားလုံးကို ကျမတို့လိုပဲ အမြန်...
KIA နှင့် အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အပစ်အခတ်ရပ်စ...
စစ်အစိုးရ မဟုတ်တော့ဘူး ဒီမိုကရေစီ အစိုးရဖြစ်နေပြီလ...
ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် နာရေးကူညီမှု အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျေ...
ထောင်ထဲမှာ ရဲဘော်တွေ ကျန်သေးတယ်ဆိုတဲ့ မနီလာသိန်း (...
ဗကသ မဟန်နီဦးနှင့် ( အင်တာဗျူး )
မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ဦးဣန္ဒ အား လျှောက်ထား မေး...
ရှမ်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် SNLD ၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြ...
ဘေဘီနီလာသိန်းရဲ့ ဖခင် ကိုဂျင်မီ နှင့် ( အင်တာဗျူး ...
စစ်တွေထောင်မှ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ကိုသန်းတင်နှင်...
ရွှေညဝါ ဆရာတော်၏ အသနားခံစာ ပယ်ချခံရ
မိုင်းဆတ်ထောင်မှ ကိုကိုကြီး ရန်ကုန်လေဆိပ်သို့ ရောက...
လွတ်မြောက် လာသူတွေနှင့် မျှော်လင့်စောင့်စား နေသူတေ...
အထူးသတင်းကြေငြာချက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၅ ဦးနေရြာေ...
ချွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးတာ မဟုတ်ဘဲ ကန့်သတ်ချက်နဲ့ လွှ...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်လာမှု့ မှတ်တမ်း...
ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ နော...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ထောက်ခံကြောင်း ဦးခင်ညွန့် ဗ...
နောက်ဆုံးရ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ စရင်း။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များ နှင့် နိုင်င...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ စီးပွားရေး၊ ...
နိုင်/ကျဉ်း မိသားစုဝင်များအား အမေရိကန် အောက်လွှတ်တေ...
တတိယအကြိမ်မြောက် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးပြီး ၁၀ ...
NLD ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး စကု ပြည်သူ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အမေရိကန်အရာရှိ ၂ဦး လာရောက်ေ...
ကချင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များသက်ကြီးပိုင်းအတွက် ကျန်းမာ...
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) နှင့် ကရင်ပြည်နယ် အ...
Global Vision ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အေ...
ချင်း CNF ပဏာမ သဘောတူညီချက် သျှမ်းထက် ၅ ချက်ပို
ဗမာက ကချင်ကို ဂရုစိုက်ကြောင်း နာရေးအသင်း ပြသလို
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှာ ပါဝင်သူတွေကု...
အပြစ်မရှိဘဲ အလုပ်ထုတ်ခံရသူ နှစ်ဦးက NDF ကိုတိုင်ကြ...
KNU နှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ယနေ့ နေ့လည် ၂ နာရ...
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဗဟန်းမြို့နယ...
အပစ်ရပ်ခြင်း အကြောင်းပြ၍ လက်နက်မစုသင့်ကြောင်း KNU ...
လွှတ်တော်အမတ်က အရပ်သားလုံခြုံရေးကို တုတ်နဲ့ရိုက်
လွတ်ခါနီး နာရီပိုင်း အလိုမှ အမှုသစ် တိုးခံလိုက်ရတဲ့...
ABSDF ဥက္ကဌ ဟောင်း ဒေါက်တာနိုင်အောင် ထိုင်းနိုင်ငံ ...
အန်အယ်ဒီ ဖွဲ့စည်းပုံ အသစ်နဲ့ ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းမည် (...
NLD လူငယ်တွေက မီးဘေး ဒုက္ခသည်တွေအား ကူညီထောက်ပံ့ ( ...
ဗြိတိန်နိုင်ငံ အပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုတွင် နို...
၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာတစ်လွှား စောင့်ကြည့်ရမည့် အြေ...
မြေမှုန်လွင်ရဲ့(ခူး) လုံးချင်း ဝတ္ထုသစ်အပေါ် သဘောထားအ...
ဆိပ်ကြီး ခနောင်တိုမြို့နယ် မှ ငါးမြို့နယ် ကွန်ယက် ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ဆက်တိုက် ...
The Lady ထိုင်းမှာ ရုံတင်တော့မည်
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအား EU စောင့်ကြည့်မည်
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်မှ ပြည်တွင်း စစ်ကို ရပ်နို...
NLD ခေါင်းဆောင်မှု ပုံသဏ္ဍာန် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်း
အမေရိကန် ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦး ထပ်မံရောက်ရှိ
အီတလီ ဆီးနိတ် လွှတ်တော် အမတ်နှင့် မဖြူဖြူသင်း တွေ့ဆ...
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ ဆိုင်းဘုတ်သစ်...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှု ...
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်အတွင်း ဖွင့်လှစ်ထားသည့် နို...
ထားဝယ်ကျောက်မီးသွေး စက်ရုံ မဂ္ဂါဝပ် ၄၀၀ လျော့ချမည်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ...
ရမည်းသင်းမြို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့မှ ကြီးမှူး...
မြ၀တီမြို့တွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ Computerized Temp...
ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျသူအားလုံးကို လွှတ်ပေးရန်...
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ထိပါးသည့်နိုင်ငံရေးပါတီကို ဖ...
NLD အမတ်လောင်းတွေ ရွေးနေပြီ
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့များ အာဏာပြို...
NLD အောင်နိုင်ရေးအစည်းအဝေး တာဝန်ခံကျင်းပ သူထိုးကြိ...
Eleven Media Group ၏ အသိပေးကြေညာခြင်း။
သမ္မတကြီး ထံသို့ ဂီတမှူးတယောက်ရဲ့သမီး အိတ်ဖွင့် ပေး...
ပါတီစုံအစိုးရ ဖော်ဆောင်နေတဲ့ကိစ္စတွေကို တပ်မတော်အနေ...
ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံရသူဟောင်းများ စုပေါင်...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေး ကဏ္ဍအတွက် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှ အ...
NLD မှာ CEC ဖျတ်သိမ်း
ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားများ၏ ပညာရေးအတွက် NLD ပါတီ...
တနင်္သာရီတိုင်းမှ ပြည်သူတဦး၏ တရားပျက်နေပြီ (ပေးစာ)
NLD နှင့် USDP နေပြည်တော် လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ် ၄ ခုမှာတေ...
သမိုင်းကို ဖျာခင်းချင်သူတွေရဲ့ စကားပါ (ဒေါက်တာနေဇင...
အမျိုးသမီးလုပ်သားများ တရားမ၀င်အလုပ်ဖြင့် ပြည်ပပို့...
TOYATPO အထည်ချုပ် စက်ရုံ အလုပ်သမားတွေ ဆန္ဒပြ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒေါက်တာ နေဝင်းမောင် ရက်လည်ကိုသွ...
၁၃ နှစ်သားနဲ့စစ်တပ်ထဲ သွင်းခံရပြီး မန္တလေးထောင်က ...
AGMP ကဗျာဆရာများ အဖွဲ့ရဲ့၇ ကြိမ်မြောက် ကဗျာဖတ်ပွဲ ...
ဒေါက်တာနေဝင်းမောင် အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံပြပွဲနှင့် ရက်လည...
အကျဉ်းကျ သျှမ်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးခွန်ထွ...
NLD ပါတီဝင်လျှောက်လွှာ တစ်သိန်း ဇန်နဝါရီလ ( ၉ ) ရက်...
အစိုးရ ၏ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ မှု များ ကို စစ်တပ် က ပိ...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ...
CNF အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ထိုး
အမေရိကန်ရောက် ချင်း-ကချင် အမျိုးသားများ ကချင်ဒုက္ခသ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးမ...
အင်းစိန်မြို့နယ် ရွာမ(အနောက်)ရပ်ကွက်ရှိ မြန်မာ့စီး...
(ကြံ့ဖွံ့ သိန်းစိန်) စစ်အုပ်စုနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲ...
ဇလွန်မြို့မှ မတရားပြုကျင့်ခံရတဲ့ ဟင်္သာတ နည်းပညာတက္ကသ...
မချမ်းဘော ရေကာတာစီမံကိန်းကို အကြောင်းပြုပြီး တရားမ...
ပန်းချီ မြိတ်ဝင်းထိန်နဲ့ ပန်းချီ နန်းတို့ ရဲ့ပန်းခ...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး ဒေါ်အောင်ဆန်း...
မကွေးမြို့က ၆၄ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနား ...
ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး၏ သမိုင်းဝင် ခရီးစဉ်...
စစ်တွေ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ ကားခဈေးကြီးမြင့်မှု...
၆၆၅၆ ဦး မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၃၀ ခန့် သာလွတ်
အကြောင်းပြချက် တစုံတရာမရှိပဲ နှစ်နဲ့ချီပြီး ကျောင်...
၁၉၅၅ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပထမဆုံး ...
(နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း) များ ၏ လွတ်ငြိမ်း ချမ...
လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ြ...
လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ နည်းဥပဒေများကို ဒုတိယအကြိမ်ြေ...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတ္ထုပ္ပတ္တိ ရုပ်ရှင်အတွက် ဒေါ်လာ ...
မီးဘေးသင့် ကယ်ဆယ်ရေး ထောက်ပံ့မှုများ တစ်ပြေးညီရရန် ...
CNF နှင့် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနေ...
ယခင်အစိုးရလက်ထက် အမှုဟောင်းများ တိုင်ကြားနိုင်
ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဟောင်း NLD ကိုမဲမပေးဘို့နဲ့ ကြံ...
လွတ်လပ်ခြင်း အနုပညာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ပြိုင်ပွဲ ဆုပေ...
လူရွှင်တော် ဇာဂနာဦးဆောင်ပါဝင်သော ဟာသပြကွက် တကွက်--...
မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး၏ အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်...
လယ်ယာ မြေတွေကို ဝေမျှ စားသောက် နေသူ လယ်သမားတဦး၏ ရ...
၀၃-၀၁-၂၀၁၂ ရက်နေ့က လွတ်မြောက် လာသော နိုင်ငံရေး အကျ...
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ ထုတ်ပြန်သော လွတ်ငြိမ်း ချ...
လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာပွဲတော် မှ မြင်ကွင်းဓာတ်ပုံများ ...
၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံရေး ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
သေဆုံးသွားတဲ့လူ အကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်
အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် တတိယအကြိမ်မြောက် လွတ်ငြိမ်းချမ...
စစ်တပ် ဘာကြောင့် သမ္မတအပေါ် ရောက်နေလဲ ?
မြန်မာနှင့်အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံကြား ကုန်သွယ်မှုနှင့...
နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေအားလုံးနဲ့လည်း ထိုက်တန်တယ်ဆ...
လွတ်လပ်ခြင်း အနုပညာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ဆုစာရင်း ( ရုပ...
ဦးတင်ဦးပြောတဲ့ နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ လ...
NLD ရုံးချုပ်၌ ၆၄ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအန...
"အဲဒီအခန်းဖြတ်" ပရိတ်သတ် အကြိုက်ဆုံး ဇာတ်ကားဆု ရရိ...
၆၄ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ကို ကြိုတဲ့အနေနဲ့ ဇန်နဝ...
စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ကြဖို့ ပြောကြားခဲ့တဲ့ လွတ်...
လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့် ထုတ်ပြန်ချက် အပေါ် ကိုဘမျို...
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့် ပေးခြင်...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ မလွတ် မြောက်နိုင်အောင် တ...
မလွတ်သေးတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေအတွက် ကျုရှင်ဆရ...
ပထမအကြိမ် လွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးများ ဇန်န၀ါ...
မီးဘေးသင့် ပြည်သူတွေကို ပြန်ခိုင်းနေပြီ ( ရုပ်သံ-သ...
ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက် လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်နဲ့ အကျဉ်းသ...
ညီညွတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး မြတ်နိုးသူများ၏ ၆၂-၀...
စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ပြီး အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းေ...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများ မှ ကြေငြှာချက်ထုတ်ြ...
စီအဲန်အက်ဖ် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်များ မြို့တေ...
နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ အမိန့်ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော ပြစ်ဒဏ်က...
လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်အမိန့် မဟုတ်ဘူး ပြစ်ဒဏ် လှေ...
၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် NLD ပါတီ၏ လုပ်ငန်းစဉ် (၃)ရပ်
အထူးဒေသ ၄ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဆွေးနွေး သဘောတူညီချက် ၆ ...
အင်းစိန်ထောင်ရှေ့မှ ၀၃-၀၁-၂၀၁၂ ရက်နေ့ မြင်ကွင်း ...
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရ...
ပြည်တွင်းစစ်ရပ်ဆိုင်းရေးအတွက် ကူညီရန် ပြည်သူများအာ...
ယနေ့ ၄နာရီ ခွဲအချိန်ထိ လွတ်မြောက်လာသူများ စာရင်း
တားမြစ်ခံရတဲ့ ဖျာပုံ NLD ပါတီ အရောင်းဆိုင် (ရုပ်/သ...
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် နှင့် သူတို့ အမြင်
အားလုံး အလိမ်ခံလိုက်ရပြီဟု ကိုကိုကြီး (စမ်းချောင်း...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ဖို့ ဆက်လက် ကြိ...
ဘဝင်ကျလောက်တဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် မဟုတ်ဘူး ဟု ...
အင်းစိန်ထောင်မှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရ အကျဉ်းသား ...
ဒေါက်တာ နေဝင်းမောင် အောက်မေ့ဖွယ် ပြပွဲ ပြုလုပ်မည်
ကျဆုံးခဲ့သည့် မီးသတ်ရဲဘော်တွေရဲ့ မိသားစုတွေကို နို...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ သီးခြားစာရင်းဖြင့်လွတ်လာရ...
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးသော်လည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်...
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အစစ် မဟုတ်ဘူး ဟု ရှေ့နေ ဦး...
အရှင်ပညာစာရ လွတ်မြောက်ရေး ဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနား ( ...
ဒေါက်တာ နေ၀င်းမောင် မကွယ်လွန် ခင် မှတ်တမ်း ၃၀၀၀ ကေ...
၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက်နေ့က ဗိုလ်ချုပ် မင်းအောင်လှိုင်မှ နိ...
မြေကြီးအတွင်းမှ ထူးဆန်းစွာ အပူလွန်ကဲမှုကြောင့် ဒေါပ...
အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ ကော်မတီနှစ်ရပ်မှ မီဒီယာဥပဒေနှင်...
နာရေး ကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)၏ (၁၁)နှစ်မြောက် အထိမ်း...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ အမိန့်ဖြင့် သေဒဏ်ပြစ်ဒဏ်များကိုေ...
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် မြန်မာနိုင်ငံ (တော သမ္မတက)ေ...
အင်တာနက်ပေါ် ပျံနှံ့နေတဲ့ အင်မတန် လူသားမဆန်တဲ့ နှိ...
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှ ကချင်စစ်ပြေး ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အားနည်းချက်များကိုစောင့်ကြည် ရ...
အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများ လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းနိုင်မ...
၂၀၁၂ ကို ကျောခိုင်းသွားသူ ဒေါက်တာ နေဝင်းမောင်
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကို ကြိုဆိုရန် စီစဉ်နေ
အောက်ခြေက လူတွေအတွက် သံတော်ဆင့်
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဦးစီးဋ္ဌာနမှ အကျင...
ပဲခူးလိပ်ပြာကန် အမှတ်(၁)ရဲစခန်း ဒုရဲအုပ် သိန်းထူးလ...
ဥပဒေနှင့် မညီညွတ်ဘဲ အဂတိလိုက်စားပြီး စီရင်ချက်ချမှ...
NLD ပါတီ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ အ​လေး​ထား​ဆောင်ရွက်မယ့်​...
လွတ်လပ်ခြင်း အနုပညာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ပြောကြားခဲ...
စင်ကာပူနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်အလုပ် ...
ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ ညနေက လွတ်လပ်ခြင်း အနုပညာရုပ်ရှင...
(၆၅) ကြိမ်မြောက် လွန်လပ်ရေးနေ့ ဆုတောင်းသံများ
13-01-2011 လွတ်မြောက်လာသူများ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း
2012 ခုနှစ် အာဇာနည်နေ့ အမှတ်တရ
2013 ရိုးရာမပျက် ဒေလီ သံချပ်
ကရင်တိုင်းရင်းသားတို့အတွက် လေ့လာရန် Website များ။
ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များအတွက် Website များ။
ညီနေမင်း ( နည်းပညာ ) မှ ကွန်ပြူတာနှင့်ပါတ်သက်၍ လေ့လာရန် စာအုပ်များ
ဗုဓ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် ဓမ္မ Website များ။
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် နှင့် သူတို့ အမြင်
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် နှင့် လွတ်လာသူများနှင့် ( အင်တာဗျူး-မှတ်တမ်း )
အလင်္ကာကျော်စွာ ရွှေမန်းတင်မောင်၏ တေးသီချင်း နှင့် ဇာတ်ထုပ်များ
အသံဖိုင်များ နှင့် ရုပ်သံသတင်းများ နားဆင်ရန်။
အသံဖိုင်များ နှင့် ရုပ်သံသတင်းများ နားဆင်ရန်။
မြန်မာ E-Books နှင့် Free Download ဆိုက်များ။
မြန်မာ E-Books နှင့် Free Download ဆိုက်များ။
မြန်မာ ပြက္ခဒိန် ကြည့်ရန်။
မြန်မာ့ နှစ်သစ်ကူး ဆုတောင်းသံများ
မြန်ာ မိုဘိုင်းဖုန်း နည်းပညာ
၂၀၁၂ နှစ်သစ်ကူး ဆုတောင်း စကားသံများ